NISA: Mukhtaar Roobow Waxaa Bil Walba Nooga Baxdo $7000 | Arrimaha Bulshada
Home News NISA: Mukhtaar Roobow Waxaa Bil Walba Nooga Baxdo $7000
NISA: Mukhtaar Roobow Waxaa Bil Walba Nooga Baxdo $7000
Bulsha:- Hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa wasiirka Amniga u soo gudbisay warbixinta afhayeenkii hore ee ururka al-shabaab Muykhtaar Roobow, kaas oo wasiirka ka dalbaday hay’adda in ay warbixintaasa keento.
Mukhtaar Roobow oo ay dowladda federaalka soo xirtay bishaan oo kale sanadkii 2018 ayaa ku jiray xabsi guri ay amnigiisa ay sugayaan sirdoonka qaranka NISA.
NISA ayaa warbixinta wasiirka ay u gudbisay ku sheegtay in xaaladda caafimaad ee mukhtaar roobow ay aad u wanaagsan tahay, uuna helo dhamaad adeegyada aas aasiga ah.
Agaasimaha NISA ayaa sidoo kale warbixinta ka soo baxday xafiiskiisa ku sheegay in HSQ ay bil walba lacag gaareyso $7000 uga baxdo nolosha Mukhtaar Roobow.
NISA ayaa sidoo kale sheegtay in Mukhtaar Roobow uu dhigto waxbarashada heerka labaad ee Master degree, macalimiintiisan uu la leeyahay xiriir joogta ah.